Vincent van Goghs nke mbụ na-enweta modernization dị mma
Okechukwu Ikwerre September 19, 2020 March 23, 2021
Gịnị kpatara Vincent van Gogh Paintings?
Vincent van Gogh ereghị ọ bụla n'ime ọrụ ebube ya. Ka nke ahụ daba n'ime: maka ọtụtụ n'ime anyị, nka bụ maka mgba.
Yabụ kedu ebe dị mfe maka onye mbido? Dijitalụ artform maka ọtụtụ folks na-enye ọ theụ niile na-eme ka aka gị ruru unyi, mana na-enweghị mkpịsị aka aka ma ọ bụ na-ese anwụrụ.
Ọ bụrụ na m ịkpa kpaliri gị na-agbalị aka gị na-eme digital art m ga-enwe nnọọ obi ụtọ n'ihi na ị. Mee ka m mara ka ị si eme.
N'ime oge ụlọ akwụkwọ nka m, anyị mụrụ amụma nka nka Post. I nwere ike ịjụ, gịnị bụ ihe ahụ? Naanị itinye oge gara aga na ugbu a lụrụ di na-abụ ihe ọhụụ.
Iji mee gị ihe ọma, ekwesịrị m ikwenye na anaghị m alụ ọgụ dịka van Gogh mere n'oge ụfọdụ n'oge obere ndụ ya.
M na-ere artwork m taa dị ka akwụkwọ mmado na kwaaji Mbipụta.
Soro m n'akwụkwọ ndị a na njem.
Van Gogh Museum Amsterdam na Rijksmuseum
"Iji rụọ ọrụ ọma, mmadụ ga-eri ezigbo nri, nọrọ n'ụlọ nke ọma, nwee mgba ya site n'oge ruo n'oge, na-a ,ụ ọkpọkọ, ma na-a coffeeụ kọfị n'udo." Abụghị m onye njem site n'ịhọrọ kama ọ bụ akara aka. "
Vincent van Gogh kwuru https://www.vangoghgallery.com/misc/quotes.html
Ọtụtụ n'ime ihe osise van Gogh mụ na ha rụkọ ọrụ dị na Van Gogh Museum Amsterdam ma ọ bụ Rijksmuseum. Institutionslọ ọrụ abụọ a na-enye ihe osise nke eserese maka nbudata. Ana m ekele ha ruo mgbe ebighi ebi.
Ọ bụrụ na ị na-agagharị na Amsterdam ma chọọ ịhụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie a, m na-atụ aro ịme ndapụ tupu oge. Will gaghị na-emechu ihu.
Ebe ngosi ihe mgbe ochie: Van Gogh Museum Amsterdam na National Museum.
Van Gogh ebe ịmalite
N’afọ 2006, ekpebiri m ịbụ onye na-ese ihe. Otu echiche abatala n'uche, gịnị ma ị tinye otu ọgụgụ site n'otu ọmarịcha ọrụ n'ime ọrụ dị iche iche dị iche iche site na iji kọmputa? Pụrụ ịhụ na emewo nke a.
Ọbụna na 2006 nke a abụghị ihe dị egwu.
N'ime afọ ole na ole sochirinụ, amalitere m iche echiche banyere ịgbakọta ụdị nkà dị iche iche?
Na 2010 emere m enyi na injinịa ezumike nká, aha mbụ Tevis. Ọ nwere ndabere siri ike na foto. Na 2012 amalitere m ịmụ Photoshop.
Site na 2014 agara m na mmepụta. Nduzi Tevis na nzaghachi na-akpali m ịkpa àgwà ka mma.
Ọ dịghị mkpa ka ị gbadaa n'ụzọ zuru ezu. Want chọrọ ịhụ nsonaazụ ya.
Van Gogh Mural II nke David Bridburg dere
Ihe oyiyi a ọ na-atọ gị ụtọ? Isi ya elu, ọdụ ya ala. LOL offọdụ n'ime unu ga-ahụ nke a n'anya. E nwere okpukpu atọ nke Vincent van Gogh eserese na foto a. Rayszarị ahụ na-ebipụ otu okpukpu miri ka ha si n'aka ekpe banye. Rayszarị ndị na-abịa site n’aka nri na-ebipụ ala abụọ miri emi.
Kedu ihe na-esote? Enwere m ihe maka gị.
Vibrance nke van Gogh Mural III nke David Bridburg dere
Pụrụ ịnụ ụtọ na-acha uhie uhie na oroma na ekpe na-agba ọsọ n'ime elu mgbe blues n'aka nri. Ntughari nke ihe osise nke oghere ọcha na-emeghe na-enye omimi.
Nke a na-ebipụta ike mara mma nke ọma na-abịa dị ka ọnụ ụzọ ama ama nke Dublin nwere agba na agwa.
Achọrọ m ịga miri… ..
… .Ma enwela egwu, aga m edebe ihe odide ndị a n'akụkụ egwuregwu.
Stain Glass M nke David Bridburg dere
Nke a dabere na “Noon Ezumike Site n’Ọrụ” van Gogh. Mbipụta nke a dị ịtụnanya. O buru na odighi onye gwara gi. LOL Akwụkwọ nhọrọ luster bụ n'ezie ihe ọhụụ.
O di nwute na amaghi m van Gogh n'onwe m. Adịghị m eme ihere maka ndị mmadụ banyere ihe ndị m kere eke. A na-eyiri ya ma ọ bụ mekpaa ya ahụ́ ná ndụ.
Ọ bụrụ na ị gụọ ihe ndị o dere, ọ ga-eju gị anya. Edere Vincent nke ọma. Agụ van van Gogh na-agbagha ọtụtụ echiche banyere ndị isi mgbaka.
“E nwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti onye na-abaghị uru na onye nkịtị. Onwere onye bu onye nzuzu site na umengwụ na adighi agwa ya, nihi isi nke odidi ya. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike were m maka otu n'ime ndị ahụ. Mgbe ahụ enwere ụdị onye ọhụụ ọzọ, onye nzuzu n'agbanyeghị onwe ya, onye n'ime ya na-agụsi agụụ ike maka ime ihe na-emeghị ihe ọ bụla n'ihi na aka ya kekọtara, n'ihi na ọ dị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, tụọ ya mkpọrọ n'otu ebe, n'ihi na ọ kọrọ ihe ọ chọrọ ịbụ onye na-arụpụta ihe, n'ihi na ọnọdụ ọdachi emewo ka ọ laa azụ na njedebe a. Onye dị otú ahụ adịghị ama mgbe niile ihe ọ ga-emeli, mana ọ na - eche na amam ihe dị mma! Adị m ịdị ndụ n'enweghị ihe kpatara ya! Amaara m na m nwere ike ịbụ ezigbo mmadụ! Kedụ ka m ga-esi bụrụ onye bara uru, kedu ka m ga esi arụ ọrụ? Enwere ihe dị n'ime m, mana gịnị nwere ike ịbụ? Ọ bụ nnọọ onye nkịtị. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, were m maka otu n'ime ndị ahụ. ”
- Vincent van Gogh, Akwụkwọ ozi nke Vincent van Gogh
Dịka ị pụrụ ịhụ, onyonyo izizi m bụ ọrụ e chepụtara echepụta.
Itinye Ngwaọrụ Dijitalụ Ndị Ọzọ n'ọrụ
Ugbu a, amalitere m iji ngwá ọrụ egwu egwu. Nwetụla gadget, na-eche ihe ọ nwere ike ịme, wee weta ụfọdụ ụda dị jụụ? Ma ọ bụ ọhụụ ọhụrụ?
Ihe kpatara ya bụ van Gogh Almond Blossoms, ụdị eserese dị nro na nke aghụghọ.
Sphere III van Gogh nke David Bridburg dere
Nke a bụ otu n’ime eserese van Gogh nke Cypress. Can ga-ahụ na ejirila m ihe osise a n'ọtụtụ ụzọ. Ga-ahụ na ejirila m ọtụtụ eserese na-akpata ya ọtụtụ ugboro.
Okirikiri 7 van Gogh nke David Bridburg
Nzaghachi dị na ibe dị n'okpuru bụ ọ joụ. Na agba m reworked ebua ihe miri emi n'ime ekiri.
Vincent van Gogh “Irises”, nke a abụghị ihe ọ bụla dị ka ihe ọ bụla onye na-ese ihe gosipụtara. Ebe ọ bụ na van Gogh mere nchọpụta nke ọma n'oge ya, ị chere na ọ ga-achọ ịchọpụta nka kọmputa?
Inv Blend 6 van Gogh nke David Bridburg dere
"Roses na Irises", ejiriwo m ihe osise a mee ihe. Na-eju anya oge ọ bụla site na ogologo ntachi obi nke ihe osise dị na-eme ka m tinye usoro dijitalụ.
Inv Blend 11 van Gogh nke David Bridburg dere
Ntughari agba na nke a dị mgbagwoju anya. Reworking asaa dị iche iche na nsụgharị na ngụkọta, i nwere ike ịhụ a na agba atụmatụ ka icho mma gị magburu onwe ohere. Versionsdị nsụgharị dị iche iche gbasasịrị na mkpokọta atọ dị iche iche: Rustic, Blend and Inv Blend.
Inv Blend 15 van Gogh nke David Bridburg dere
N'okpuru ebe a bụ ihe ndị ọzọ nke Vincent van Gogh Irises. Oge a agbanwebeghị ihe osise dị n'okpuru ya. Ma modernization zuru ezu dị ka ị pụrụ ịhụ.
BW 6 van Gogh nke David Bridburg
The Nchịkọta Black na White, BW, bu ihe omuma akwukwo banyere echiche. Nwere ike ịhụ otu ihe ọkụkụ a na-acha ọcha na oji n'ime nchịkọta m.
The Layered gbasara mkpokọta
Inwale na ngwaọrụ dugara The Layered gbasara mkpokọta.
Offọdụ ndị na-ese ihe na ndụ m nke m lere anya nyere m otito maka ọrụ ndị a. Enwere m obi ụtọ ma nwee ekele.
The “Almọnd okooko osisi” maka dijitalụ ọgwụgwọ gosipụtara ọzọ dịgidere ike dị ka ọkara maka ebumnuche m. A na-acha agba iji dọta uche gị. Na-arụ ọrụ dị ka ngwoolu magburu onwe ya n'ụlọ gị.
Layered 2 van Gogh nke David Bridburg dere
Ngwakọta a nke "Roses na Irises" megide "Almond Blossoms" nwere ibe nwanne nwanyị na Almọnd Osisi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na uhie nke a bụ ememme. Na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na ọbá akwụkwọ gị ma ọ bụ ime ụlọ ime ụlọ na-enye ekele maka nka.
Layered 5 van Gogh nke David Bridburg dere
Kedụ ka ị chere maka osisi oroma? Echiche m oroma na-acha uhie uhie dịka nwatakịrị mere ka m nwee ụjọ. Ndị agha na-acha anụnụ anụnụ na-abanye n'ụgbọ ojii na-atụkwu ụjọ. Dabere na nbipụta nke onyonyo a sitere na obere na aghụghọ ruo nnukwu na ike.
Layered 9 van Gogh nke David Bridburg dere
"Oge ehihie ezumike site na ọrụ", nke a bụ ịhụnanya. Enwere obi uto na imeputa oge a.
Layered 14 van Gogh nke David Bridburg dere
Dịka m kọọrọ gị na blog a, m na-agakọ ụdịdị. Isiokwu dị na nka oge a na-aghọ ihe. Might nwere ike ịkọ isi gị, m na-ekwu na eserese mmadụ bụzi ihe.
Iji gosi gị ihe a, m ga-etinye otu van Gogh na onyonyo abụọ na-abụghị nke van Gogh. I nwekwara ike ịhụ Nchịkọta oge.
Nchịkọta nke ihe oyiyi na-esi na isiokwu gaa na ihe ọzọ, wee gaa na obere akara ngosi.
Oge a 2 van Gogh nke David Bridburg dere
Onye isi na uwe ugbu a nọ n'ihe mkpuchi dị ka nwa bebi.
Oge a nke 5 Hanneman nke David Bridburg dere
Gịnị ka Michelangelo ga-eche? Anya ya nwere ike ghara ịghọta ihe akara ngosi a bụ. Anyị na-ahụ silhouette nke David. The mfe ngagharị nke echiche bụ itinye aka gị.
Site na ụwa nke echiche oge a ị na-achọ ịbanye n'ọnọdụ dị iche na nka. Nke ahụ ọ bụ nkọwa nke radikal? LOL
Might nwere ike ịhụ ụkpụrụ ebe a. Anaghị m edozi otu ụdị ọrụ. Nke a bụ nkwenye maka ndị na-ese ihe. Enwetara m ọtụtụ ihe ịghaghachi azụ na ndị na-ese ihe m maka ịghara ịtụtụ otu ụdị.
Nke mbu echere m na ị na-eme gị obi ụtọ. Nke abụọ iji dijitalụ ngwaọrụ kwere ka a nnwere onwe na-ese enweghị. Nke ato abughi m na ebe onodu gallery ka onye nwe gallery na-ekwuputa ya. Pụtara ihe rere bụ maka mmekọrịta mụ na gị. Ọ dịghị onye ọzọ ga-achọpụta nke ahụ wee debe m n'otu ụdị ma ọ bụ otu echiche.
Biputere Post Art
Nke a bụ Amụma ọgụgụ isi nke America nkọwa:
“Post Pop Art, ụwa buru ibu nke echiche na nrọ ndị America. Mbipụta ndị a nwere ike bipụta ruo nha 9 ụkwụ 4. Nta ka ha buru.
Amụma ọgụgụ isi nke America nke David Bridburg dere
Pop Art na-eche banyere ọdịbendị anyị kemgbe Agha Vietnam. Post Pop Art tinyere oke mgbagwoju anya nke ọdịbendị anyị n'oge na-adịbeghị anya. A na-ewebata agba, ya bụ pinks, uhie, oroma na agba odo. Na-ebugharị ihe osise na ụwa nke ahịhịa.
Amamihe nke American 6 nke David Bridburg dere
Enwere m ike ịhụ Amamịghe ọgụgụ isi nke America 6 na ụlọ elu penthouse New York City. Ihe ngosi a nwere ike na ịdị mma nke na-ekwu.
Amamihe nke American 7 nke David Bridburg dere
American Intellectual 7 bụ nwanne ibe. Ọdịdị dị ukwuu nke van Gogh Almond Blossoms na-ajụ ọnọdụ ọdịbendị. Ọrụ ndị a bụ ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ịgbasa nkọwa miri emi, ahapụrụ m gị ka ị chee maka ihe ndị a.
My ụzọ bụ ndị na-abụghị onye edemede na akụkọ mgbe ochie Mark Twain.
“A ga-ekpe ndị na-anwa ịchọta ebumnobi na akụkọ a ikpe; a ga-achụpụ ndị na-achọ ịchọta omume dị n'ime ya; ndị na-achọ ịchọta ibé na ya ga-agbapụ.
Site n'usoro nke onye edemede
GG, CHEIF nke ORBỌCH ””
- Iheanacho Onyema Adventures nke Huck Finn
Pinks na turquoise na-esote na American Intellectual 11. Nke a bụ ụzọ dị iche iche maka gị. Otu rịbọnụ nke dị n'ụlọ ime ụlọ gị nke anwụ na-achasi ike. Van Gogh si “Almọnd okooko osisi” bụ isi.
Amamihe nke American 11 nke David Bridburg dere
N’okpuru ebe a, ị hụrụ ubi ugbo ndị France site na 135 afọ gara aga. Ihe osise dị n'okpuru m bụ nke mbụ gbanwere, ma jiri ya rụọ ọrụ mbụ. Eluigwe na-acha akwụkwọ ndụ na ọla edo ọla edo bara ọgaranya bụ mgbanwe m.
Ihe a na - ahụ anya na - eji nwayọ na - adakwasị ihe onyonyo obodo
Amamihe nke American 13 nke David Bridburg dere
Mgbanwe nke oge nke Vincent van Gogh
The Nchịkọta Scrog Nchịkwa bụ nka ọgbara, ma n’okpuru nche anwụ nke Postmodernism.
Na-eche, gịnị bụ "scrog"? Ajuju bụ ntanaka igwe na-eto eto wii wii. Mkpuru osisi nke osisi a na-adọkpụ gafee ntupu iji mee ka osisi ahụ too ọtụtụ buds.
Were dị ka okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wii wii dị mkpa na ebe a ugbu a. Anyị na-atụ ndị mmadụ mkpọrọ na aka nri na mpụ maka mpụ metụtara ọgwụ ha. Nke a bụ ịkwụ ụgwọ ego ụtụ isi kacha mma. Ọ kachasị njọ ịkpọchi ndị mmadụ na-ewute ọtụtụ ezinụlọ na-enweghị isi. JMO Dịka ede ederede a, ihe agbanweela.
Adịghị m aokerụ sịga ma ọ bụ kerụ wii wii.
Ndị aha na-agba ọsọ dị ka “Na-adịbeghị anya x”. Na-adịbeghị anya ịbụ a synonym maka oge a. "Na nso nso a" bụ onye na - etinye ebe "Untitled" nke ọtụtụ ndị na - ese ihe jiri ọgwụ ọgbụgbọ. Na nchịkọta m, m na-eme ụdị aha a na-agbanwe n'ụzọ dị iche iche.
Na-ajụ ihe na - eme nchịkọta mkpokọta ọgbara ọhụụ Postmodernism? Gwakọta nke oge gara aga na nke oge a.
Ogige ubi Vincent van Gogh tinye na British Museum skylight. Ga - ahụ ụfọdụ nkwupụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike na mkpokọta dị ka echiche na-akpali akpali. Ga-ahụkwa ọmarịcha ihe osise mara mma.
9 na-adịbeghị anya site n'aka David Bridburg
Ihe onyonyo dị n’okpuru abụghị ọrụ mgbapụta van Gogh. Ihe oyiyi ahụ na-eduga na ihe ngosipụta Vincent van Gogh. Abụọ ndị a bụ ụmụnne nwanyị dịka ị ga-ahụ.
Ka ị na-ele anya n’elu ihe adịghị adị, ị na-ahụ ogo dị na ya? Dị ka Post Modern artist m bụ agba agnostic. Postmodernism enweghị usoro agba. Emere m echiche ole na ole na-aga ihe oyiyi na onyonyo. Tonal mma dị m mkpa.
N'ọtụtụ ọrụ m, m kwughachiri usoro ihe mejupụtara. Nke a bụ otu n'ime oge ndị ahụ. Obi ga-adị m ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na ị kwuru n'okpuru ebe a na onyonyo a. Mgbe mụ na ndị nchịkọta m na - emekọrịta ihe, Achọrọ m ịma echiche gị.
Nke a bụ onyinyo na-enwu gbaa. Ahịa. Vincent, onye na-ese ihe ahụ, ọ ga-eji ngwaọrụ dijitalụ? Eziokwu ahụ bụ Vincent bụ nnwale nnwale dịka onye nwegoro ụzọ.
Ndị a bụ ngosipụta dị egwu. Abughi m zuru ike. N’ụzọ dị mma, onyogho ndị ahụ abụghị van Gogh. Nsonaazụ bụ nke m n'ezie. Na nka nka bu nkwuwa okwu n’agha.
Ihe m setịpụrụ maka gị dịka onye na - agụ ya bụ ntụrụndụ dị mfe. Ga-ahụ ebe ihe siri ike gbasiri ike. Ebuputa ihe eji eme ihe mgbe obula tupu komputa abia nke ya. Echiche m na ngwa m di iche.
Ana m arịọ gị mgbaghara. Dị ka onye na-ese ihe, ọ na-esiri anyị ike ịkpata ihe anyị ga-eri. Otingkwanye mpi m bụ ụzọ iji nụ obi eziokwu. Ọ bụrụ n'ịhụ ọrụ nka ị nwere mmasị na ya biko zụrụ m.
Daalụ maka ịgụ ihe odide m.
Ajụjụ: Ngbanwe ọgbara ọhụụ nke ihe osise Vincent van Gogh, ọ bụ ezigbo echiche? Ka ị na-agagharị na onyogho, ị ga - ahụ na agabigala m ihe ọfụma osise Vincent.